Buraannews.com » Nabar ku yiilay Shacabka Muqdisho oo dhinac laga daweeyay Warbixin
Dhageyso:Wafti katirsan Australia oo kulan kula qaatay Garowe madaxweynaha Puntland. Imaraadka Carabta iyo Uk oo iska kaashanaya dagaalka burcad badeeda. Howgal maalintii 2-aad ka soconaya Degmada warta nabada. Ethiopia “Somaliland taagero walbo ayaan siineynaa”. Bam Gacmeed Qasaara Gaystay Oo Kadhacay Isgooyska Howl Wadaag SOMALI LINKS
Nabar ku yiilay Shacabka Muqdisho oo dhinac laga daweeyay Warbixin
December 1, 2012 - Written by reporter2 - Edited byameen ali Magaalada Muqdisho waxaa muddo dadku ay ka cabanayean lacago farabadan oo ay gadiidleydu dadku ka qadaan, taa oo aheyd mid marwaliba shacabku wadna qabad ku aheyd oo ay siweyn u hadal hayeen.
Shacabka Muqdisho ayaa u muuqda kuwo laga daweeyay hal nabad laakiin nabad kale uukusoo baxayo maadaama ay dadka la kulmayaan dhaca iyo tuugadii oo dib usoo laabatay.